Hoyga Wararka Marar | Axkaamta iyo Waajibaadka Soonka.
Axkaamta, wajibaadka iyo fadliga bisha Ramadaan oo la soomo.
Bisha barakaysan ee Ramadaanka waxaa u gaar ah arrimahan soo socda oo kala ah:
Soonka waa tiirka afaraad ee tiirarka Islaamka ruuxii beeniyana waa gaal.
Waxaa la soo dejiyey bisha Ramadaan Qur’aanka kariimka.
Waxaa sunna ah bisha Ramadaan in la tukado salaada taraawiixda.
Waxaa Ramadaanka dhacay dagaalkii badar ee dadka taariikhda aqriyey la socdaan wacdaradii meeshaa ka dhacday.
Sidoo kale bisha Ramadaan waxaa dhacay furashadii nabiga (s.c.w) loo balanqaaday oo ahayd furashadii Makkah Al-Mukarramah, dadkii reer Makkana ay Islaamka u soo galayeen si iskadaba joog.
Waxaa la furaa bisha Ramadaanka albaada jannada, waxaana la xidhaa albaabada naarta iyo shayaadintaba. Laakiinse shayaadiinul insi nagama maqna (dadka alle ku caasigaroobay).
wakhtigee la soomayaa ramadaanka?
Maxaa la xiriira Soonka?
Waa maxay waajibaadka Soonku?
Dunida aan maanta ku nool nahay wax walba waajibaad bay leeyihiin bal aan fiirino waajibaadka Ramadaanka waana kuwan:
1. Waxaa waajib ku ah qofka sooman inuu ka tago xanta iyo beenta, (xantana waxaa la yiraahdaa in aad qof walaalkaa ah ama walaashaa ah aad ka sheegto wax uu dhibsanayo ama aanu raali ka ahayn).
2.Namiimnimada oo ah warka loo kala qaado dadka dhexdiisa oo dabadeedna ay dadkii is dhexmaraan ama ay dhalato fidno iyo fasaad.
3. Lacnada (habaarka).
4. Cayda waa inuu iska ilaaliyo oo aanu afkiisa ka oran eray xun noocuu doono ha noqdee isla markaana uusa dhageysan, indhihiisa waa inuusan xaaraan ku fiirin, carrabkiisana uu ka dhowro inuu ku hadlo wax xaaraan ah, sida beenta ama hadal been ah oo la abuurto. Rasuulkii Allena isagoo ka hadlaya arrimahan soo sheegnay wuxuu yiri. (“Qofkii aan iska dayneyn, beenta iyo ku dhaqankeeda Ilaahay dan kama laha inuu qofkaasi ka tago cuntadiisa iyo cabbiddiisa”).
Maxaa Soonka buriya?
1. Cunto iyo cabid kas ah, Alle waa naxariiste ka ugu wanaagsan sidaa daraadeedna qofka hadduu hilmaamo isagoo sooman inuu wax cabo ama cuno wax dhibaato ah kuma keenayso soomkisina wuu jiraaa.
4. haweenka haddii uu ka yimaado dhiig caado ama mid dhalmo.
5. Iska matajin kas ah, haddiise aan la iska keenin soonku kuma burayo.
6. ka bixidda diinta Islaamka (riddoobid), Allaa ka magan galne’e.
Soonka waajibka ah.
Haddii uu qofku nidar ku galo inuu soomo amaba ay tahay inuu soomo kafaaro gud ahaan dambiyo ka dhacay oo soomid loo waajibeyey, qofkaa waxaa saaran inuu soomo maalmaha cayiman ee waajibka ah inuu soomo, haddii aysan maalmahaa cayinayn, inuu dhakso iska gudo baa dhowrsanaan badan.
Soonka sunnada ah.
Cashuura- 9ka iyo 10ka bisha Muxarram dago.
Soomidda maalinta Carafaad, 9ka bisha xajka, haddii uusan qofku xaaji ahayn.
Soomidda maalmaha nayla qaadka (ayaamul bayd) 13ka 14ka 15ka bil dayaxeed kasta.
Lix maalmood oo laga soomo bisha Shawwaal (soon fur).
Soomidda isniin iyo khamiis waliba.
Siddeedda maalmood ee ugu horreeya bisha xajka (carafo).
Soonka karaahiyada ah.
Soonka la soomo oo keliya sabtida, ama axadda, ama jumcaha.
Soonka sunnada ah ee ay soonto haweeney idan la’aan ninkeeda isagoo jooga.
Soonka xaaraanta ah.
Shuruudaha uu ku ansixi karo soonku waa laba nooc:
Shuruudaha ansixidda oo ka dhigaya soomidda ansax.
Shuruudaha ansixidda iyo aqbalidda Soonka.
Inaad tahay Muslim, soomidda qofka gaalka ah ma aha ansax.
Inaad tahay daahir (haweenka) waa inay ka yihiin daahir caadada (xaydka) iyo (Nifaaska) dhiiga la yimaada dhalmada,
Inaad niyaysato habeennimada soonka maalinta xigta, niyadduna waa inaan lagu dhawaaqin, maxaalkeeduna (booskeeda) waa qalbiga. Qofka walibana gaarkii buu u niyaysan haddiina uusan qofku horay uniyaysan xittaa haddii uu markaa ka af qabsado oo uu ka joogo dhammaan waxa ka reebban qofka sooman, soonkiisu ma ansaxayo.
Waa inaad tahay qaan gaar; Soonka lagama rabo ilmo aan baaluqin.
Qaybaha sunnada ah ee Soonka/
Wuxuu sidoo kale Nabigu ku dhiiriyey asxaabtiisa inay isla sidaa u afuraa. Timirta guud ahaan waxaa aad looga helaa Jasiirada Carabta. biyahana sidoo kale waa wax meel walba laga helo, gunta arrintaasina waxay ahayd inaysan dadku dhib kala kulmin furidda soonkooda oo ay ku afuraan waxyaalaha guud ee la heli karo. Dhinaca kale timirtu waxay qofka u kabtaa wixii jirkiisa siin karay tamar iyo xoog. Biyuhana ma aha wax guud oo keliya ee la heli karo ee waa daahir wax daahiriya.
Ajarka weyn ee ku jira afurinta qof sooman.
Arrimo kuu oggolaanaya inaadan Soomin.
Waxaa jira arrimo kuu oggolaanaya inaadan soomin, waana sida soo socota:
Inaad ku jirto safar.
Inaad tahay bukaan.
Inaad ilmo siddo (xaamilo tahay).
Inaad ilmo nuujineysida.
Xaamiladda iyo nuujisadu hadday u baqaan ilmaha ay nuujinayaan ama kan caloosha ku jira way u bannaan tahay inay afuraan, wayna qallaynayaan soonkii, waxaana ugu wanaagsan inay qalleeyaan sida ugu dhaqsi badan ee ay karaan, waxayna bixinayaan oo qallahooda raacinayaan quudin miskiin intii ay afureen (ama siin qadar dhan kiilo iyo bar oo bariis ama galley ah, ama mesego, iwm, miskiin maalintii, sidaa awgeed haddii ay afureen bishii oo dhan waxay bixinayaan jawaan bariis ah, ama wax la mid ah oo 45 kiilo ah iyagoon qalleynayana soonkii). Laakiin haddii ay naftooda u baqaan way afurayaan kaddibna waxay qallaynayaan soonka markay awoodaan sida ugu dhakhso badan, quudinna lagama rabo.
Xaaladda qofka u banaan inuu soonka jebiyo,
Faa’iidooyinka soonka waxaa kamid ah qofka inuu ka barto sabar, iyo inuu taqwo ka korarsado.
Waxaa kaloo ka mid ah faa’idooyinka soonka qofka qaniga ah wuxuu ogaanayaa qaddarka Nimcada Rabbi siiyey oo aanay haysan qaar badan oo fuqaro ah.
WAXAA QORAY: cabka50@hotmail.com